Akhriso: Magacyada Xildhibaanadda ku fadhiya 11 Kursi oo lagu dooranayo Magaalada Baydhaba - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Akhriso: Magacyada Xildhibaanadda ku fadhiya 11 Kursi oo lagu dooranayo Magaalada Baydhaba - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Akhriso: Magacyada Xildhibaanadda ku fadhiya 11 Kursi oo lagu dooranayo Magaalada Baydhaba
Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed ayaa xalay shaaciyey 11 kursi oo doorashadooda ka dhaceyso magaalada Baydhaba, xilli Muqdisho laga qabaqaabinayo shirka Golaha wadatashiga si loo saxo Doorashada.
K/Galbeed ayaa ah maamul taageersan madaxweynihii xilka ka dhammaaday ee Maxamed Farmaajo, waxayna hore u diideen go’aan uu Guddiga Doorashad heer Federaal ku joojiyey doorashada qaar ka mida kuraas muran ka dhashay.
Liiska magacyada xildhibaannada Baarlamaankii 10-aad ee ku fadhiya kuraasta cusub ee lagu dooranayo magaalada Baydhaba ayaa kala ah sida soo socota:
1:HOP002: Waxaa ku fadhiyey xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Maxamed.
2:HOP046: Waxaa ku fadiday Raabaco Sheekh Nuur.
3: HOP050: Waxaa ku xildhibaan Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif.
4:HOP056: Waxaa ku matalayay xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal.
5: HOP085: Waxaa ku fadhiyey ildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla Xuseen.
6: HOP156: Waxaa ku fadhiyey xildhibaan Cali Cabdi Cismaan.
7:HOP159: Waxaa ku fadhiyey xildhibaan Xasan Ibraahim Maxamed.
8: HOP176: Waxaa ku matalayay xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud (Boorow).
9: HOP184: Waxaa ku fadhiyey xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdi.
10: HOP231: Waxaa ku fadhiyey xildhibaanMaxamuud Macalim Yaxye.
11: HOP253: Waxaa ku fadhiyey xildhibaanSamra Ibraahim Cumar.
Previous articleRW Rooble oo kulan la yeeshay Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland (Sawirro)
Next articleDad loo qabtay Muwaadin Soomaali ah oo u dhintay Dabaq kasoo dhacay Dalka Malta